Isizinda Sokuqashiswa Kwensiza Yevidiyo engu- # (VERD) | Plum Amazing
Isizinda Sokuqasha Izinsiza zevidiyo ezi- # (VERD)
Okusheshayo: 5 / 25 / 17
Dinga: IMac, Win, Android, iOS neWebhu
Isizindalwazi Sokuqasha Izinsimbi Zevidiyo (VERD)
Lesi isizinda semininingwane esakhelwe iFayileMaker sezinkampani eziqashisa ngemishini yamavidiyo / amafilimu. Ingalandelela inani elikhulu lemishini efana namakhamera (ividiyo nokuma), ukukhanyisa, izinsiza, izintambo, imishini yomsindo, neminye imishini eyahlukahlukene. Inamamojula okusungula, ukuqasha, i-invoyisi, ukufaka amakhodi ngebha nokulandelela okokusebenza kuzo zonke izinyathelo zenqubo.
* 'Sifaka amahora ayi-10 wokwenza ngokwezifiso ngentengo yokuthenga.
Le database ekulula ukuyisebenzisa kodwa ephelele yeFayilemaker inokusetshenziswa okubili okukhulu:
I-Video Equipment Rental Database (VERD) - Lesi isizindalwazi esingenakuqhathaniswa ezinkampanini ezinenqwaba yamakhamera (ividiyo namanje), ukukhanyisa, izinsiza, amakhebuli, imishini yomsindo neminye imishini eyahlukahlukene eqashwa isikhathi esifushane nesikhathi eside. Le database ivumela inkampani yokuqasha imishini yevidiyo ukuthi isungule, iqashe, ifake i-invoyisi futhi ilandelele imishini kuzo zonke izinyathelo zenqubo. Ivumela ukwenza ukuqasha ngokushesha, ngokungaguquguquki nangokusebenza kahle.
2. Idathabheyisi Yokuqashwa Kwesiteji Esibanzi (i-SPRD) - Lokhu kuvumela inhlangano enenani elikhulu lezinsiza ezivela kumidlalo yeshashalazi, kumabhayisikobho, njll. usebenzisa izikena zamazinyo aluhlaza nokuningi. Ngale database kungasethwa izakhiwo zaseshashalazini zokugcina izwe lonke. Kungani amasethi, izinsiza zokugqoka nezingubo zokugqoka zika'Peter Pan 'noma' uFiddler on the Roof 'kudalwe kaninginingi unyaka nonyaka. Gcina imali, usebenzise kabusha izinsiza zokugcina impahla, amasethi, nezimpahla
Xhumana nathi ukuthola eminye imininingwane, amanani entengo nedemo.
Iningi lamasistimu aqashisayo e-database aqashwayo athatha inqubo "eyodwa ifanela konke" edinga amakhasimende ukuthi aguqule izinqubo zawo kwisoftware. Sithole ukuthi izinhlobo ezahlukahlukene zamabhizinisi eziqashisayo kaningi zinemodeli yazo eyehlukile yebhizinisi.
✓ Kulula ukuyisebenzisa
✓ Ukubalwa kwamanani nentela
Tracking yokusungula kokulandela
Email I-imeyili ehlanganisiwe
✓ Ukungenisa / ukuthumela idatha
Ukuphrinta kwekhodi ye-Bar nokuskena
Group Ukuqoqwa kwempahla
Display Ukubonisa isithombe
Ipulatifomu ye-Cross - iWindows, iMac neWebhu.
Custom Ukwenza ngokwezifiso okuphelele kwazo zonke izici
Ipulatifomu yedatha: FileMaker. I-database ehamba phambili ye-Mac, Win, iPhone, Android neWebhu
Ezinye izindawo zokusebenza ezingahluka kakhulu kufaka phakathi inqubo yokuqashwa kwesilinganiso sokuqasha, ukuphathwa kwempahla, ukuboniswa kwempahla okususelwa kumakhasimende nokuhlelwa kwempahla.
Uhlelo Lokuqasha lubandakanya ikhono lokuphatha amaklayenti noxhumana nabo, ukudala izingcaphuno eziqashisayo ngokukhipha okuzenzakalelayo kwama-oda womsebenzi wokuxhuma kanye nama-invoyisi, ukuthumela i-imeyili okuhlanganisiwe kwezingcaphuno zokuqasha nama-invoice, ukuphathwa kwempahla kufaka phakathi ukuqoqwa okuguquguqukayo kwezinto zempahla kanye nokuhlanganiswa "okulahlekile nokulimazekile ”Ukulandelela nokubika.
Sizokwenza ngokwezifiso ngokuvumelana nezidingo zakho:
ukwakhiwa kwezilinganiso zokuqashwa
inqubo yokuphathwa kwempahla kubandakanya ukufaka amakhodi
ukuqoqwa nokubukiswa kwezithombe zempahla ngaphakathi kohlelo
inqubo yokuhlelwa kwempahla
Ukwenza ngokwezifiso kokuqala kwalezi zici kufakiwe entengo yokuthengisa yohlelo. Ukwenza ngokwezifiso okuqhubekayo kuyatholakala nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi sokuphila kohlelo ngenkokhiso efanelekile.
• Isikhathi esilinganiselwe, thola amahora ayi-10 wokwenza ngokwezifiso kufakwe ekuthengeni kwakho.
• Thola ukwenza ngokwezifiso okungeziwe ku- $ 125.00 USD ngehora.
• Noma thenga ibhange lamahora angama-50 ngo- $ 5000.00 USD, ukonga okungu- $ 1250.00!
• Masakhe uhlelo lokusebenza oludingayo ukuphatha ukuqasha kwakho!
Intengo Yezemfundo: $ 1750 - sidinga i-oda kusuka kusizinda se-.edu
Ukuqeqesha (uma kudingeka): $ 250 ne- $ 150 yomuntu ngamunye owengeziwe
Ukusekela: 1 umsebenzisi $ 50 / ngenyanga ($ 25 / ngenyanga ngomsebenzisi ngamunye owengeziwe)